Sawirro: Al-Shabab oo soo bandhigay 4 dagaalyahan oo kaga dhintay weerarkii Buula Gaduud (Waa isku beel) | Entertainment and News Site
Home » News » Sawirro: Al-Shabab oo soo bandhigay 4 dagaalyahan oo kaga dhintay weerarkii Buula Gaduud (Waa isku beel)
Sawirro: Al-Shabab oo soo bandhigay 4 dagaalyahan oo kaga dhintay weerarkii Buula Gaduud (Waa isku beel)
daajis.com:-Ururka Al-Shabaab ayaa Maanta si rasmi ah usoo bandhigay muuqaal ku saabsan dagaalkii Cuslaa oo ay dhawaan ku qaadeen Xerada Buula Gaduud ee Maamulka Jubbaland.
Haddaba Muuqaalkaas qeybtiisa dambe, Ururka Al-Shabaab ayaa kusoo bandhigay Magacyada iyo beelaha ay kasoo kala jeedaan 4 qof oo ay sheegeen inay kaga dhinteen dagaalkii xoogaana oo ay dhawaan ku qaadeen Xerada Buula Gaduud ee Maamulka Jubblanad.
Waxaa xusid mudan in Afartaan dagaalyahan ay gabi ahaan kasoo wada jeedaan Deegaanka Koonfur Galbeed, waxaana qeyb ka ah ninkii fuliyey Qaraxii lagu furtay howlgalkaas, halka seddexda kalana ay ku dhinteen Dagaalka.
Afartaan nin ayaa dhammaantood kasoo wada jeedo deegaanada Maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo seddex kamid ah ay kasoo jeedaan Beesha Raxan weyne halka mid kalana uu yahay Eelaay.
1) Cabdulqaadir Cali Ibraahim (Boqol Hore)